Home Shuruudaha iyo Xaaladaha
Fadlan si taxadar leh u akhri shuruudaha iyo shuruudaha Shuruudahan iyo xaaladdan waxay ku saabsan tahay isticmaalka contentbogger ee content. Waxay ku xirantahay inaan ogaanno inaanan u ogolaaneynin isticmaalka RSS-ka ee ku saabsan bogga loogu talagalay soo saarida alaabooyinka.
Isticmaalkaaga iyo isticmaalka boggaga internetka wuxuu ku saleysan yahay aqbalaaddaada iyo u hoggaansanaanta shuruudahaan. Shuruudahaan waxay khuseeyaan dhammaan martida.
Marka aad gasho bogga internetka, waxaad ogolaatay inaad ku xirto Shuruudahaas.
Adeeggayaga waxaa ku jiri kara xiriirka boggaga internetka ama adeegyada aan laheyn ama ay xukumaan LifeBogger.
LifeBogger ma laha kantarool, mana u maleynayo masuuliyad, maadada, siyaasadaha asturnaanta, ama waxqabadka qaybaha sadexaad ee internetka ama adeegyada. Waxaad sidoo kale qiraysaa oo ku waafaqsan tahay in LifeBogger aaney mas'uul ka ahayn ama laxidhiidhin, si toos ah ama si dadban, wixii khasaare ah ama khasaaro ah oo sababay ama la sheegey inay sababtay ama la xiriirto isticmaalka ama ku kalsoonaanta waxyaalla, alaab ama adeegyo oo laga heli karo ama loo marayo goobaha internetka ama adeegyadan.
Shuruudahaas waa in lagu maamulaa oo lagu sifeeyaa si waafaqsan shuruucda Nigeria, iyada oo aan loo eegin khilaafaadka sharciyada.
Waxaan xaq u leenahay, si ikhtiyaari ah, inaan wax ka badalo ama badalno Shuruudahaan wakhti kasta. Haddii dib-u-eegis uu yahay wax aan isku dayno waxaanu isku dayi doonaa inaanu ugu yaraan ogeysiino 30 ka hor intaan wax shuruudo cusub ah samayn. Maxaa ka tarjumaya isbeddel mug leh ayaa lagu go'aamin doonaa go'aankayaga kali ah.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan Shuruudaha, fadlan nagala soo xiriir lifebogger@gmail.com